Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo maanta Gaaray Jubbaland – Radio Daljir
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo maanta Gaaray Jubbaland
Maajo 4, 2015 7:26 b 0
Isniin, May 04, 2015 (Daljir) — Wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka maamul-goboleedka Puntland, C/xakiin Xaaji Cumar Cameey ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen wasiirro iyo xildhibaanno ka tirsan xukuumadda iyo Baarlamaanka Puntland.
Wafdigan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Kismaayo si diiran ugu soo dhaweeyay xubno uu ka mid ahaa madaxweyne kuxigeenka 2-aad ee maamulka Jubbaland Suldaan C/qaadir Xaaji Maxamuud (Luga-dheere), mas\_’uuliyiin ka tirsan golaha wasiirrada iyo baarlamaanka Jubbaland, ururrada haweenka, dhalinyarada iyo qeybaha bulshada magaalada Kismaayo.
Soo dhaweynta wafdiga ayaa waxaa qayb ka ahayd cayaaraha Hidaha iyo Dhaqanka ee ay caanka ku yihiin Jubooyinka, waxaana wafdiga markii uu yimid uu salaam la Dhex-maray madaxdii iyo shacabkii kala duwaa ee soo dhaweeyay.
Madaxweyne ku-xigeenka 2-aad ee Jubbaland Suldaan C/qaadir Xaaji Max’uud Lugadheere oo ugu horeyn warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka Kismaayo ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsanyihiin wafdiga ballaaran ee ka yimid Puntland ee uu horkacayo madaxweeyne kuxigeenka in uu u yimaado si uu uga qeybqaato caleemo saarka baarlamanka Jubbaland.
C/xakiin Xaaji Cameey, madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo isna goobta ka hadlay ayaa ugu horeyn ka mahadceliyay soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay, isagoo xusay in ay u yimaadeen si ay uga qeybqaataan caleemo saarka baarlamanka Jubbaland.
“Caleemo-saarkii Madaxweynaha waxaan ahaa ninkii ugu horreesay ee yimaada, maanta oo ay tahay caleemo-saarka guddoonka baarlamaanka Jubbaland-na waan imid, taasna waxay caddeyneysaa sida aan u jecel-nahay dowlad-goboleedka Jubbaland,” ayuu madaxweyne ku-xigeenka Puntland ku yiri hadal kooban oo uu jeediyay.
Maalinta berri ah ayaa lagu wadaa in magaalada Kismaayo ay ka dhacdo munaasabad lagu caleemo-saarka baarlamaanka Jubbaland, iyadoo la filayo in xafladda ay kasoo qayb-galaan madax kala duwan oo la rajeynayo in berri ay soo gaaraan magaalada Kismaayo.
(Dhagayso) Caawa Iyo Daljir – Maxamed C/llaahi Cali Kooshin – Isniin 05, May 2015